မိန်းမကိုယ်ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်း - Hello Sayarwon
အမျိုးသမီးတွေဟာ မိန်းမကိုယ်ကထွက်တဲ့ အနံ့ဆိုးတွေနဲ့ ဓမ္မတာလာပြီး ရာသီသွေးအကြွင်းအကျန်တွေကို ဖယ်ရှားဖို့၊ လိင်ကတဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ဖို့၊ ကိုယ်ဝန်မရအောင် တားဆီးဖို့ မိန်းမကိုယ်သန့်စင်ဆေးရည် အမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွမ်းကျင်သူဆရာဝန်တွေရဲ့ အဆိုအရ မိန်းမကိုယ်သန့်စင်ဆေးရည် အသုံးပြုခြင်းဟာ စောစောကပြောခဲ့တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်း မဟုတ်တဲ့အပြင် ရောဂါပိုးကူးစက်နိုင်ချေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေနဲ့ အခြားကျန်းမာရေးပြဿနာများ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို မြင့်စေတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
မိန်းမကိုယ်ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်း (Vaginal Douching) ဆိုတာ ဘာလဲ
Douche ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာ ပြင်သစ်စကားလုံးဖြစ်ပြီး “ဆေးကြောသည်” သို့မဟုတ် “စိုစွတ်စေသည်” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ Douching ဆိုတာကတော့ ရေ ဒါမှမဟုတ် အခြားအရည်တစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြုပြီး မိန်းမကိုယ်အတွင်းထဲအထိ ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ ပိုးသတ်ဆေးနဲ့ မွှေးရနံ့ပါတဲ့ မိန်းမကိုယ်သန့်စင်ဆေးရည်တွေကို ဆေးဆိုင်တွေနဲ့ စူပါမားကတ်တွေမှာ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးရည်တွေကို ပုလင်း ဒါမှမဟုတ် အိတ်ပုံစံနဲ့ ရရှိနိုင်ပြီး ထိပ်ဝမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ ပြွန်ငယ်ကတဆင့် မိန်းမကိုယ်ထဲဝင်အောင်ဖြန်းပြီး အသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်။
မိန်းမကိုယ်သန့်စင်ဆေးရည် အသုံးပြုခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက ဘာတွေလဲ
တကယ်တော့ မိန်းမကိုယ်သန့်စင်ဆေးရည် အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဘယ်လိုကောင်းကျိုးရလဒ်တွေ ရလာနိုင်တယ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပါဘူး။ ကိုယ်ဝန်မဆောင်မီ ၆လအတွင်း မိန်းမကိုယ်သန့်စင်ဆေးရည် အသုံးပြုခြင်းဟာ လမစေ့ဘဲ ကလေးမွေးဖွားနိုင်ချေကို လျော့ကျစေတယ်လို့ လေ့လာမှုတစ်ခုက ဖော်ပြထားပေမယ့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ကာလအတွင်း မိန်းမကိုယ်သန့်စင်ဆေးရည် အသုံးပြုခြင်းကတော့ လမစေ့ဘဲကလေးမွေးဖွားခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်း တွေ့လာရပါတယ်။
မိန်းမကိုယ်သန့်စင်ဆေးရည် အသုံးပြုခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေက ဘာတွေလဲ
ယေဘုယျအားဖြင့် ကြည့်မယ်ဆိုရင် မိန်းမကိုယ်သန့်စင်ဆေးရည် အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ရလာမယ့် ဆိုးကျိုးတွေက ကောင်းကျိုးထက် ပိုများပါတယ်။
မိန်းမကိုယ်ပိုးဝင်ခြင်း (ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှား ကူးစက်ခံရခြင်း)
သန့်စင်ဆေးရည်အသုံးပြုခြင်းဟာ မိန်းမကိုယ်အတွင်းပိုင်းရဲ့ ပုံမှန် pH ပမာဏကို ပြောင်းလဲစေပြီး ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများ ရှင်သန်ပေါက်ဖွားဖို့ ပိုမိုလွယ်ကူစေပါတယ်။ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် မိန်းမကိုယ်သန့်စင်ဆေးရည် အသုံးပြုသူတွေဟာ လုံးဝအသုံးမပြုသူတွေထက် ပိုးဝင်နိုင်ချေ ငါးဆပိုများတယ်လို့ လေ့လာမှုအချို့က ဆိုထားပါတယ်။ မိန်းမကိုယ်ပိုးဝင်ခြင်းဟာ လမစေ့ဘဲ ကလေးမီးဖွားနိုင်ချေနဲ့ သားအိမ်တစ်ရှူး နေရာလွဲမှားနိုင်ချေကိုလည်း မြင့်စေပါတယ်။
မိန်းမကိုယ်သန့်စင်ဆေးရည် အသုံးပြုခြင်းကြောင့် သားအိမ်၊ သားဥပြွန်နှင့် သားဥအိမ် စတဲ့ မမျိုးပွားအင်္ဂါတွေဆီ ရောဂါပိုးပျံ့နှံ့ပြီး နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သန့်စင်ဆေးရည်အသုံးပြုတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာ ဒီပြဿနာဖြစ်နိုင်ချေ ၇၃ရာခိုင်နှုန်း ပိုများပါတယ်။
တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် မိန်းမကိုယ်သန့်စင်ဆေးရည် အသုံးပြုသူတွေဟာ လုံးဝအသုံးမပြုသူတွေနဲ့ယှဉ်ရင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေ နည်းသွားတတ်ပါတယ်။ သန့်စင်ဆေးရည်အသုံးပြုခြင်းဟာ နေရာလွဲမှား သန္ဓေတည်နိုင်ချေ (သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်နိုင်ချေ) ကိုလည်း ၇၆ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်စေပါတယ်။
မိန်းမကိုယ်သန့်စင်ဆေးရည် တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် အသုံးပြုသူတွေဟာ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဖြစ်ဖို့ အလားအလာ ပိုများပါတယ်။
မိန်းမကိုယ်ကိုဆေးကြောသန့်စင်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက ဘာလဲ
မိန်းမကိုယ်ဟာ သူ့သဘာဝအလျောက် အချွဲထုတ်လုပ်ပြီး သွေး၊ သုတ်ရည်နဲ့ မိန်းမကိုယ်ကထွက်တဲ့ အရည်တွေကို သန့်စင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ သန့်စင်တဲ့ မိန်းမကိုယ်မှာလည်း တစ်နေ့တာအတွင်းပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ အပျော့စားအနံ့တစ်ခု ရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ သတိပြုဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်လည်း မိန်းမကိုယ်က အနံ့ပြင်းပြင်းထွက်တတ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ သင့်မိန်းမကိုယ်ကို သန့်ရှင်းကျန်းမာနေစေဖို့ မိန်းမကိုယ်အပြင်ဘက်ကို ရေနွေး၊ အမွှေးနံ့မပါတဲ့ဆပ်ပြာတစ်မျိုးမျိုး အသုံးပြုပြီး ဆေးကြောပေးရုံနဲ့ လုံလောက်ပါတယ်။ အနံ့ပါဝင်တဲ့ အမျိုးသမီးလစဉ်သုံးပစ္စည်း၊ ပေါင်ဒါနဲ့ ဖြန်းဆေးတွေဟာ မိန်းမကိုယ်ပိုးဝင်နိုင်ချေကို များစေပါတယ်။
မိန်းမကိုယ်ဟာ သဘာဝအလျောက် သန့်စင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတွက် သန့်စင်ဆေးရည်အသုံးပြုပြီး ဆေးကြောဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ မိန်းမကိုယ်သန့်စင်ဆေးရည်တွေဟာ သင့်ခန္ဓါကိုယ်မှာ ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးပိုဖြစ်စေနိုင်တာကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။
Vaginal Douching: Helpful or Harmful? http://www.webmd.com/women/guide/vaginal-douching-helpful-or-harmful. Accessed August 28, 2016.
Douching fact sheet. http://womenshealth.gov/publications/our-publications/fact-sheet/douching.html. Accessed August 28, 2016.
Vaginal Douche (Douching). http://www.medicinenet.com/vaginal_douche_douching/article.htm. Accessed August 28, 2016.